Siyaasi Caan Ah Oo Xilal Ka Soo Qabtay Dawlada Fadaraalka Somaliya Oo Madaxwayne Gaas Kula Tartamaya Doorashada Puntland Iyo Taariikh Nololeedkiisa +VIDEO
Friday, 10 August 2018 15:08
10/08/2018(BNN) Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha DFS Soomaaliya iskamarkaana soo noqdey Wasiirka waxbarashada Puntlan sanadihii Cabdi Faaraxa Siciid Juxa ayaa xalay ku dhawaaqay inuu u taaganyahay xilka Madaxweynaah Puntland ee 2019.
Xaflad uu ku shaacinayay ololahiisa doorasho oo ay ka qaybgaleen qaar kamid ah ragga u sharaxan xilkaas ayaa lagu qabtay magaalada Garowe. “Waxan isku sharraxay idinka waxaan u baahnahay gacantiina iyo taageeridiina,”
“Waxaan u mahad naqayaa madaxwayne Cabdiraxmaan Faroole oo fursad ii siiyay tijaabo siyaasadda oo ii magaacabay wasiirka waxbarashada Puntland. Sidoo kale waxaan mahad u celinayaa madaxwayne farmaajo oo fursad ii siiyay in xil kasoo qabto wasaaradda arrimaha gudaha Somaaliya”. sidaas waxaa yiri Cabdi Faarax Juxa.
Mar uu ka hadlayay qayb kamid ah ajandihiisa siyaasadeed iyo waxyaabaha uu diiradda saari doono wuxuu ugu hormariyay Amniga isagoo tilmaamay inuu kala tashan doono cidda ehelka u ah. “Haddii lay doorto waxaa kow u ah qorshahayga Amni dhammaystiran oo ay Puntland hesho. Waxaan dhisaya amniga Puntland anoo u maray cidda shaqadeeda aqoonta u leh. Waxaan awood saarayaa koboca dhaqaale. Waxaan ka baaran dagayaa oo dul istaagay sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha Puntland oo leh gacan ammaan ah,” ayuu yidhi Juxa.
Juxa ayaa sidoo kale ballanqaaday hadii xilkan loo doorto inuu kala saari doono hay’adda dowladda ee hadda isku xidhan sida Garsoorka iyo fulinta si loo helo caddaalada.
More in this category: « DAAWO: Maareeyaha Dekeda Barbara Oo Waxba Kama Jiraan Ku Tilmaamay Sun La Sheegay In Lagu Aasay Dekeda Sheegayna In Uu Sharciga La Tiigsanayo Cidii Warkaasi Keentay Guddoomiyaha Baarlamaanka Dowlad Deegaanka Soomalida Itoobiya Oo Ay Weheliyeen Wasiiro Iyo Saraakiil Oo Maanta Loo Duuliyey Magaalada Adis Ababa »